Ekpere maka ọrụ. ? Chọta, nweta na ka akpọọ gị
10 Mingụ Nkeji
Ekpere maka oru Anyị nwere ike nweta ọtụtụ uru.
Ekpere bụ atụmatụ ime mmụọ nke na-enyere anyị aka ịchọta nsogbu nye nsogbu ndị anyị na-amabeghị ihe anyị ga-eme ma ọ bụ ihe anyị ga-eme.
Na ahịrịokwu a anyị nwere ike jụọ maka onwe anyị, ka ọnọdụ ọrụ dị mma, jụọ maka ndị isi anyị ma ọ bụ ndị nọ n'okpuru anyị na ụfọdụ arịrịọ ndị ọzọ dabere n'ọnọdụ dịgasị iche iche nwere ike ibilite na gburugburu ebe obibi.
Ihe dị mkpa bụ ịmara na maka nsogbu ndị metụtara ọrụ, enwerekwa ekpere enwere ike ịme ya kpọmkwem na ozugbo, icheta oge niile na ekpere bụ omume nke okwukwe nke a ga-emerịrị site na ikwere ike o nwere.
1 Ekpere maka oru O siri ike?
1.1 Ekpere ka ị chọta ọrụ
1.2 Ekpere ịgọzi ọrụ ahụ
1.3 Ekpere iji nweta ọrụ n'ime ụbọchị atọ
1.4 Requestrịọ ngwa ngwa ọrụ
1.5 Callkpọ m ọrụ
Ekpere maka oru O siri ike?
Ekpere obula di ike. Maka nke a, o zuru ezu iji okwukwe jiri ekpere.
Ọ bụrụ n’inwere okwukwe na ọ bụrụ n’ị chee na ihe niile na-aga nke ọma, ọ ga-arụ ọrụ.
Kwere na Chineke Ọ na-eto n’ike ya. Naanị mgbe ahụ ka ị ga-enye ihe niile dị mma.
Etula oge ozo, bido ikpe ekpere ugbua!
Ekpere ka ị chọta ọrụ
Jesus, Nna nke Eluigwe:
Nna m, onye ndu m, ike m, a na m agwa gị onye nzọpụta m…
I nwere nwa gi nwoke n’ebe a onye mehiere, ma onye huru gi n’anya ...
Ekelere gị maka ịhụnanya gị, maka ịdịmma mgbe ebighi ebi gị na nchekwa ị na-enye anyị, Nna.
Nke ahụ maka gị, ihe niile ga - ekwe omume na ihe niile ị nwere ike ime n'ihi na amara gị bara ụba ma ị naghị ahapụ m. N'oge ihe isi ike, ịhapụghị inye m aka.
Bread bụ achịcha, ị bụ ndụ, ị bụ ịhụnanya na nkasi obi. N'ọchịchịrị, ìhè gị na-eduzi m. Abịara m bịakwute gị, na-egbu ikpere, Nna m hụrụ n’anya, abịakwala m ọzọ ikpe ekpere maka ịdị mma ebighị ebi gị, maka nchebe gị.
N’ihi na amaara m na site n’aka gị, m gaghị atụ egwu ihe ọ bụla ma ọ dịghị ihe m ga-akọ. N'ihi na Gi onwe m, onyenwe m nke ihe oma, nyere aka ndi dara ada.
M na-arịọ gị ka ị kwụsịlata nchegbu m, m na-arịọ ka ọ zaa arịrịọ m. Wepụ ihe mgbu m na nsogbu.
Nna, onye m hụrụ n’anya kpọlitere Jizọs n’ọnwụ, leba anya n’ihe m chọrọ ma nyere m aka ịkwado ha. A na m arịọ gị maka ọrụ ọhụrụ, Nna m.
N'ihi na amaara m na atụmatụ gị zuru oke, n'ihi na enwere m mmetụta nke ịbụ onye a na-asọpụrụ. Abịara m ka m rịọ ọrụ m. Achọrọ m ọrụ ahụ iji kwado ezinụlọ m.
Ama m na Gị n’ịdịmma gị, you gaghị ekwe ka m daa n'ihi aka gị Agaghị m atụ egwu na ahụ iru ala m ga-enwe. Ana m arịọ gị nna, ka a nye m agụụ ike ozugbo.
Nna diri Nna. Ama m na ị ga-emeghe ụzọ na windo nke olileanya. Ama m na n’ime ebere gị dị ukwuu ị ga-ahụ ọrụ dị mma maka m.
Nyere m aka, Onye-nwem, m nwee ndidi na ụgwọ ọrụ. Mee ya ka o nwee ezigbo ọrụ, ịba ọgaranya ma kwụsie ike. Arịọrịọ n’arịrịọ m ka m guzobe onwe m.
Mee ka m bụrụ onye na-egbo mkpa ma gọzie ezinụlọ m, nri m.
M na-arịọ gị maka ọrụ ahụ ma ọ bụ maka ịmalite azụmahịa nke m.
(Jiri nwayọ nwayọ rịọ arịrịọ gị)
Nyere m aka n’ibu Onye-nwe m, a na m arịọ gị, Onye-nwe m.
Ekwere m ihe niile dị n’ime gị, Chineke m.
Gọzie Gi rue mgbe ebighi ebi, Jehova!
Ekpere a ka anyi choo oru di ike!
Ọnọdụ ọrụ agbasala n'ọtụtụ obodo ụwa. Agbanyeghị maka okwu a, enwere ahịrịokwu.
N'echiche a, ihe kachasị dị mma bụ ịrịọ ozugbo na ezi obi ihe anyị chọrọ ịhụ, ụdị ọrụ anyị na-achọ inweta ma rịọ ikwere.
Enweghị ekpere na-esite n’obi anaghị emeju mmụọ anyị afọ na otu ike ahụ ka anyị ga-agafe ebe ọ bụla anyị rutere.
Ekpere siri ike nwere ike imebi agbụ nke enweghị ike iji ike na anụ ahụ merie anyị.
Ekpere ịgọzi ọrụ ahụ
Ekele m Gi, Onye-nwe, n’ihi na enwere m ike ịrụ ọrụ.
Gọzie ọrụ m na nke ndị ọrụ ibe m.
Nye anyị amara iji zute gị site na ọrụ ụbọchị niile.
Nyere anyị aka ịbụ ndị ohu na-adịghị ike nke ndị ọzọ. Nyere anyị aka ime ka ọrụ anyị bụrụ ekpere.
Nyere anyị aka ịchọpụta n’ebe ọrụ ga-ekwe omume iwulite ụwa ka mma.
Nna-ukwu, dịka onye pụrụ igbochi akpịrị na-akpọ nkụ maka ikpe ziri ezi, nye anyị amara ka anyị zere onwe anyị ihe efu niile na ka anyị dịrị umeala n’obi.
Ekele m Gi, Onye-nwe, n’ihi na enwere m ike ịrụ ọrụ. Ekwela ka ezinụlọ m nwee nkwado na na n'ụlọ niile enwere mgbe niile ihe dị mkpa iji bie ùgwù.
Ekpere e mere maka iji gọzie ndụ anyị ma ọ bụ ndụ nke ndị gbara anyị gburugburu na-abụkarị ezigbo arịrịọ a pụrụ ịrịọ.
Mgbe anyị rịrị maka ndị ọzọ, anyị na-egosi ezi obi nke Chineke nyere anyị.
Ọ bụ ya mere anyị ji ekpe ekpere ịgọzi ọrụ ahụ Ọ bụghị ekpere maka abamuru nke anyị kama ọ bụ maka ọdịmma nke ndị niile na - eso anyị arụ ọrụ.
N’ime ahịrịokwu a, ị nwere ike ịrịọ maka ọnọdụ ndị ahụ ebe nrụrụ ike na echiche ọjọọ juputara ebe ọrụ.
Ekpere iji nweta ọrụ n'ime ụbọchị atọ
Jizọs, ezigbo Jizọs m, Jizọs m hụrụ n'anya, Onyenwe m, Onye ọzụzụ atụrụ m, Onye nzọpụta m, Chineke m, ekwere m gị dịka Ọkpara nke Nna mgbe nile ebighị ebi, ekwere m gị, m na-eto gị maka ọmịiko gị na ịdị mma gị, ana m asọpụrụ gị n'ihi na ị na-enye m nchekwa na gị Enweghị m atụ egwu ihe ọ bụla, ahụrụ m gị n'anya n'ihi na ị na-asa m mma na ihu ọma nke eluigwe mgbe ọ bụla m na-eso ihe mgbu m niile n'ihu Gị, oge ọ bụla m na-arịọ maka enyemaka gị.
Jisos, ezigbo Jisos, onye m huru n’anya nke Jisos, gi onye bu ndi n’enwu enwu, na-agbakwunye aka gi ma nye m aka mgbe m biara. Gị onye bụ nwanne na enyi nke ndị nọ na mkpa ma hapụkwa anyị ka anyị ghara ịkpafu, Gị onye nọ n’akụkụ anyị mgbe niile, na-emere m ebere ma na-enyere m aka na nsogbu m niile, na-enwe ọmịiko ma napụta m nsogbu m. Dịka onye ogbugbo pụrụ iche n’agbata Chineke na mmadụ, ọ na-ewetara arịrịọ m n’ihu Ya ka m soro ya.
Jesus, ezigbo Jizọs m, Jizọs hụrụ n'anya, leba anya na nnukwu mkpa m nwere ugbu a: n'ọchịchọ m na-achọ ọrụ achọpụtara m na m na-akwụsi ike n'agbanyeghị na m na-anwale na enweghị m ike ịchọta ya, achọrọ m ya ngwa ngwa n'ihi na mkpa m dị oke egwu ma sie ike, maka Ana m arịọ gị ka i nye m enyemaka ịhụnanya gị.
Jisos, ezigbo Jisos, onye m huru n’anya, Jesu mepere ụzọ niile achọtara m, emee ka m nwee ezigbo ọrụ ma ọ bụ azụmaahịa na-eme ka m nwee ọnọdụ akụ na ụba ma na-enye m ohere iji bulie ma gaa n’ihu, ezigbo ọrụ ma ọ bụ ọrụ na-aga nke ọma ma ọ bụ azụmahịa ebe Enwere m ike ịnweta ọkachamara na uto nkeonwe.
Jisos, ezigbo Jisos m, onye m huru n’anya nke Jisos, gi onye n’emeju nkpuru obi na aru n’ime udo, na ewelata ahuhu m na aru n’imem, hapụ m ka m pụọ n’oge ọjọọ a ma ghara ikwe ka m makpuo na miri.
N’oge awa nke enweghị olileanya na ụkọ, na-eduzi m n’ihe m na - eme, mee ka m chọta ọrụ dị mma, mepeere m ụzọ ma tinye ndị na-eme ihe n'eziokwu n’ụzọ m na-enye nkwado ha; nye m amamihe iji gosi ikike m na ntachi obi m na nnọgidesi ike m ịghara ịda mba.
Nyere m aka inweta ezigbo ọrụ ebe m nwere ike ịrụ ọrụ m nke ọma ma nweta ego a na-achọkarị n'ụlọ m, zitere m ezigbo Jizọs ngọzi gị ka m wee nweta ihe m chọrọ:
(jiri okwukwe siri ike kwuo ihe ị chọrọ inweta)
Jisos, ezigbo Jisos, onye Jesu m huru n’anya, a na m ekele gị site n’ala ala m maka uru niile ị nyere m na maka ndị na-abịa abịa m ji n’aka na agaghị ala n’ihu, abụ m nke gị niile ma chọọ ka m biri n’eluigwe ruo mgbe ebighi ebi. , ebe m nwere olile anya ikele gị rue mgbe ebighi ebi na agaghị m esikwa n’ebe ị nọ ọzọ.
Ka ọ dịrị. Amen
Like masịrị ekpere ahụ iji nweta ọrụ n'ime ụbọchị 3?
Ọtụtụ oge anyị na-amụta na enwere ọrụ dị ebe anyị chọrọ ịrụ mana na ọ ga-enweghị ike ịbanye na ọrụ ahụ.
N'ụdị ndị a, ọ dịghị ihe dị mma karịa ikpe ekpere n'ihi na ọ bụ leta anyị kacha mma.
Mgbe ị na-abanye ajụjụ ọnụ ọrụ anyị nwere ike ịrịọ Onye-nwe-anyị Chineke onye kere elu-igwe na ụwa ka o nye anyị amara ime ezi echiche mbụ.
N’aka nke ozo anyi aghaghi iju ajuju oge ufodu bu ihe anyi choro abughi ihe Chineke choro n’ebe anyi di, n’uche a anyi aghaghi amata nke oma ime ihe bu uche Chineke.
Ka ibugharịa gaa na ahịrịokwu ọrụ ọzọ.
Requestrịọ ngwa ngwa ọrụ
Chukwu bu onye n’achọ oru n’uwa.
Enwere m ntụkwasị obi na oke ụba ya nakwa na ọ ga-enye m ọrụ kachasị mma ọ rụpụtara ruo ugbu a.
Ọrụ ebe m ga-enwe ọ happyụ.
M ga-enwe ihe ịga nke ọma, n'ihi na m ga-enwe ọtụtụ ohere ịrị. Ọrụ ebe ọnọdụ ọrụ dị ebube.
Ọrụ ebe ndị isi m bụ ndị na-atụ egwu Chineke ma na-enye ndị ọrụ ha ebe dị mma ma zie ezi.
Maka nke a, aga m anọ ogologo oge n’ọrụ ahụ, obi ga-adị m ụtọ ịrụ ọrụ ebe Chineke nwere ọtụtụ ngwongwo maka m, kwekọrọ n’ihe niile. ụwa.
Na ekele, aga m enwe obi ụtọ mgbe niile, na-eso ọ sharingụ niile nke Onyenwe anyị, na-eji nwayọ nwayọ na-akuzi ihe m, iguzosi ike n'ihe, iguzosi ike n'ihe, ịdị jụụ, ibu ọrụ na iji ọ joyụ niile na-enye ụbọchị niile. yabụ, ihe m ji ịhụnanya mee, bụ maka abamuru nke ọtụtụ mmadụ.
Amen, ekele Nna m na ị nụwo m, nke a mee
Arbịarute ebe ha na-anaghị achọ ndị ọrụ na itinye akwụkwọ maka ọrụ nwere ike ịbụ nzọụkwụ chọrọ nnukwu obi ike ebe enwere ezigbo ohere na a ga-ajụ anyị n'enweghị igosipụta nkà anyị niile.
La ekpere ịrịọ maka ọrụ Ngwa ngwa nwere ike inyere anyị aka ịgafe nnwale izizi nke itinye akwụkwọ maka ọrụ ozugbo ọ bụghị na anyị ahụla ọkwa.
N’oge ịrịọ maka ọrụ, a na-arịọ enyemaka ime mmụọ ka ị mara ebe anyị ga-aga, yabụ na ọ bụ Chukwu na-eduzi nzọụkwụ anyị oge anyị hapụrụ ụlọ ruo mgbe anyị ga-alaghachi na ya.
Callkpọ m ọrụ
Nna m nke eluigwe hụrụ n’anya, n’Aha Jizọs, achọrọ m amamihe gị ma tụkwasị gị obi na ị duziri m chọọ ọrụ ga-akachasị mma m.
Achọrọ m ịga ije n'okpuru ebere gị na eziokwu gị na -enweghị ịkpọrọ uche nke onwe m na nghọta m na-enweghị isi.
Nyere m aka inweta ọrụ dị mma, nke ejiri aka m, ọ nweghị ihe na-efu ma ọ bụ nke m.
Agaghị m atụ ụjọ ma ọ bụ nwee nchegbu maka ihe ọ bụla, Nna, n’ihi na a na m ahụ udo gị n’abia n’obi m na n’obi m.
Are bụ isi iyi m nke mmiri na-enye ndụ, a tụkwasịrị m obi na nduzi gị na ị ga-enye m ike iguzogide nsogbu na ndalata nke ndụ m kwa ụbọchị.
Ekele m Gi, Nna, maka inye m oru m dika oru gi si di na otuto nke Onyenwe anyi.
Oh Chineke m, ka ike gị nọnyere m taa ịchọta ọrụ. Duru m na ọrụ ahụ m ga-ahụ mkpụrụ obi m niile n'anya.
Duru m gaa n'ebe nwere ọnọdụ nkwanye ùgwù na imekọ ihe ọnụ, na gburugburu ebe nchekwa na nke obi ụtọ.
Nyere m aka ịchọta echiche na mmụọ ime mmụọ ahụ n'ọrụ ọhụrụ ahụ ị nwere na - echekwa m.
Ndụ adịghị mfe mgbe niile, mana m ga-agba mbọ icheta na are nọ mgbe niile inyere m aka n’oge niile nke ndụ m.
Onye agọziri agọzi ka Jehova bụ, gọzie aha nsọ Gị Amen.
N’oge ahụ nke anyị hapụworo akwụkwọ anyị n’ụlọ ọrụ ụfọdụ, anyị ga-alaghachi ụlọ na-eche ka a ga-akpọ oku n’oge dị mkpirikpi o kwere omume, n’ihi na nnwale kachasị anyị na nke a bụ ichere n’enweghị nkụda mmụọ.
Ndidi bu isi ihe na nchere a.
Agbanyeghị, anyị agaghị echere ruo mgbe ebighi ebi, ha na-arịọ ka Abụọ megharịa mpempe ahụ na aka anyị ka oku dị mma anyị na-eche na-abịa ngwa ngwa.
Ihe dị mkpa bụ inwe okwukwe n’oge ekpere maka ọrụ. Ọ dịghị ihe ọzọ.